Zvatingaita Kuti Tibatsire Vamwe | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“MHIRIZHONGA yakangotanga pashure pesarudzo, zvikaita kuti zviuru zveZvapupu zvaJehovha zvitize misha yazvo,” anodaro François, mukuru anogara mune imwe yenyika dzichiri kusimukira. “Zvokudya uye mishonga zvakatanga kunetsa, uye zvaiwanika zvacho zvaidhura zvekudhura zviya. Mabhangi akavhara, uye michina yekudhirowa mari yakasara isisina chinhu kana kuti yafa.”
Hama dzepabazi dzakabva dzatumira mari uye zvinhu zvaidiwa nekukurumidza kuZvapupu zvakanga zvabva mumisha yazvo zvakanga zvakaungana paDzimba dzoUmambo munyika yose. Mapato ainetsana akavhara migwagwa, asi sezvo vose vaiziva kuti Zvapupu hazvina kwazvakarerekera, motokari dzebazi dzaiwanzoregwa dzichipfuura.
“Tichienda kune imwe Imba yoUmambo vanhu vakanga vakahwanda vakatanga kupfura motokari yedu,” anodaro François. “Asi mabara acho akatipotsa. Patakaona musoja aimhanyira kwatiri akapakata, takabva tangodzora mota nekukurumidza ndokuivhetemutsa tichidzoka kubazi. Takatenda Jehovha kuti takapona. Musi waitevera, hama 130 dzaiva muImba yoUmambo iyoyo dzakakwanisa kutizira kusina ngozi. Vamwe vakauya kuhofisi yebazi, kwatakavakabatsira nezvinhu zvekunamata nezvavaida pakurarama kusvikira mhirizhonga yapera.”
“Hofisi yebazi yakazogamuchira tsamba dzakawanda dzaibva kuhama munyika yose dzichitenda zvikuru zvadzakaitirwa,” anodaro François. “Kuona hama dzavo dzokune dzimwe nzvimbo dzichivabatsira, kwakawedzera kuvimba kwavo naJehovha.”
Patinosangana nenjodzi dzinoitika dzoga kana kuti dzinokonzerwa nevanhu, hatiudzi hama dzedu nehanzvadzi dzinoshayiwa kuti ‘dzidziyirwe uye dzigute.’ (Jak. 2:15, 16) Panzvimbo paizvozvo tinoedza kuvabatsira nezvavanenge vachida. Izvozvo ndizvo zvakaitwa nevaKristu vekutanga pavakanzwa nyevero yekuti kwaizova nenzara. “Vadzidzi vakasarudza, mumwe nomumwe wavo maererano nezvaaigona, kuti vaite basa rokuyamura nokutumira zvinhu kuhama dzaigara muJudhiya.”—Mab. 11:28-30.
Sevashumiri vaJehovha tine chido chekubatsira vanoshayiwa nezvinhu zvavangada pakurarama. Asi vanhu vanodawo kubatsirwa pakunamata. (Mat. 5:3) Kuti vazive kuti vanoda rubatsiro rwakadaro, Jesu akapa vateveri vake basa rekuita kuti vanhu vave vadzidzi. (Mat. 28:19, 20) Mumwe nemumwe wedu anopa nguva yake yakawanda, simba uye zvinhu kuti aite basa iri. Sesangano, tinoshandisa imwe mari inenge yabviswa semipiro pakubatsira vanoshayiwa, asi mipiro iyi inonyanya kushanda pakutsigira Umambo uye kuparidza mashoko akanaka. Patinoita izvi tinoratidza kuti tinoda Jehovha nemuvakidzani.—Mat. 22:37-39.
Vaya vanotsigira basa remunyika yose reZvapupu zvaJehovha vanogona kuva nechokwadi chekuti mipiro yavo iri kushandiswa zvakanaka. Unokwanisa here kubatsira hama dzako dzinoshayiwa? Unoda here kutsigira basa rekuita kuti vanhu vave vadzidzi? Kana zvakadaro, “usarega kuitira zvakanaka vaya vanofanira kuitirwa zvakanaka, kana ruoko rwako ruine simba rokuzviita.”—Zvir. 3:27.
Sezvaiitwa mumazuva omuapostora Pauro, vakawanda ‘vanotsaura chimwe chinhu’ kana kuronga mari yavanozoisa mumabhokisi ezvipo akanzi “Basa Romunyika Yose.” (1 VaK. 16:2) Mwedzi woga woga, ungano dzinotumira mari iyi kuhofisi yeZvapupu zvaJehovha yomunyika yadzo. Munhu anogonawo kutumira chipo chake kusangano repamutemo rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha munyika yake. Kana muchida zita resangano repamutemo rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha munyika yenyu, tapota nyorerai kana kuti fonerai bazi remunyika yenyu. Kero yebazi inogona kuwanika pawww.jw.org Zvipo zvinogona kutumirwa nomunhu pachake ndeizvi:
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvatingaita Kuti Tibatsire Vamwe
Kana uchida kupa chipo (opens new window)